Ubuntu 15.04 Vermet Vivid, inona no antenaina? | Avy amin'ny Linux
Manakaiky ny fandefasana kinova Ubuntu vaovao, satria amin'ny aprily 2015 isika ka efa fantatry ny maro fa ny isa dia: 15.04, Anarana Vermet mazava.
Omaly fotsiny dia niditra tamin'ny dingana farany nivoahany izy, midika izany fa tokony ho efa vonona… tsy hahazo fiasa vaovao na zavatra hafa toa izany, miasa fotsiny amin'ny bibikely lehibe na zavatra hafa. Ny tiako holazaina dia ny fotoana fijanonana farany izay ilain'i Debian amam-bolana, fa Ubuntu manao azy ao anatin'ny herinandro vitsivitsy LOL!
Na izany aza, ity kinova Ubuntu ity dia misy fanovana lehibe marobe, fanovana avy amin'ny init ho an'ny systemd ... kernel vaovao ... fanatsarana ny Unity, sns, hojerentsika kely kokoa ny sasany amin'ireny.
2 Kernel sy init… ehm, ny tiako holazaina dia ny systemd
3 Ubuntu 15.04 Famaranana
Unity, zavatra iray izay niteraka (ary manohy mamokatra, na dia kely aza) adihevitra be dia be, indrindra noho ny fametrahana Canonical, ankehitriny dia mitondra fanovana eo amin'ny menio fampiharana izany. Hatramin'izao dia tsy nahita an'ity menio ity fotsiny isika (fantatrao, File, Edit, sns) rehefa navadikay tamin'ny toerana tokony hisy azy ny kursor mouse,… tsy ho eo amin'ny takelaka birao toy izany intsony ny menio, fa ny 'eo an-toerana' kokoa, eo amin'ny bara faran'ny fampiharana.
Ny Unity 7.3 dia mitondra Dash ihany koa, Houd, sary mihetsika vaovao ... sns.
Araka ny hita, dia namaha ny hadisoana sasany izay nahatonga ny Compiz niaraka tamin'ny mpamily Nvidia tompona hadisoana izy ireo. Ary koa, hoy izy ireo ny Compiz 0.9.12 dia manana fanohanana fampidirana feno miaraka izao VADIKO.
Kernel e ao anatiny … Ie, ny tiako ho lazaina systemd
Tsy hijanona hiresaka momba ny mahatsara sy maharatsy ny systemdEfa niresaka momba izany isika (sy ny maro hafa) eto amin'ny DesdeLinux ... ny tiana hambara dia ity kinova vaovaon'ny Ubuntu ity hampiasa systemd fa tsy init.
Hahatsikaritra an'ity fanovana ity ve ireo mpampiasa tsy mandroso?… Sahy milaza aho hoe tsia. Na iza na iza mampiasa ny solosaina amin'ny haino aman-jery, asa an-tsekoly na birao, izany hoe tsy fitantanana rafitra mandroso ... dia tsy mila mahatsikaritra an'io fanovana io, fa a, ndao hojerentsika ny fomba ampiharan'ny Ubuntu azy 😀
Ary koa, ny Ubuntu 15.04 dia ho avy miaraka amin'ny Linux kernel kinova 3.19.3 Nohavaozina fampiharana, toy ny mahazatra
Toy ny mahazatra, ny kinova Ubuntu dia misy rindrambaiko nohavaozina, LibreOffice, Firefox, Chromium, sns sns. Avy eo raha te hampiasa PPA tsara izy ireo ... mety hanana rindrambaiko nohavaozina angamba izy ireo, na dia mety hisy fiantraikany amin'ny haavon'ny fitoniana aza 😉
Ubuntu 15.04 Famaranana
Ireo izay liana amin'ny fitsapana ity kinova Ubuntu ity dia afaka misintona ny beta, na eo aza ny fanombohana ofisialy ny kinova farany sy maharitra dia ny 23 aprily amin'ity taona 2015 ity, ka tsy ho ela koa ny fiandrasana.
Amin'ny lafiny fitoniana, Ubuntu io ... ho hitantsika ny fomba fitondran-tenany.
Tsy hoe mitsikera an'i Ubuntu foana aho, io dia iray amin'ireo disko izay mitondra ny ankamaroan'ny mpampiasa eo amin'ny tontolontsika Linux ... fa izy io koa dia iray amin'ireo very mpampiasa be indrindra (raha tsy ny ankamaroany), izany hoe , mpampiasa izay mijanona tsy mampiasa an'ity distro ity hampiasa hafa, na Linux Mint, Fedora, Arch na Debian, ho an'ny zavatra iray sa tsia? ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Ubuntu 15.04 Vermet Vivid, inona no antenaina?
Manantena aho fa avy amin'ny Ubuntu, fa amin'ny ho avy dia hanatsara ny fanjifana angovo izy ireo, maharitra 30 minitra fotsiny ny bateriko, miaraka amin'i Windows dia maharitra 2 ora.
Satria mamorona rafitra ho an'ny finday izy ireo, ny fampiharana azy dia tokony hifanaraka amin'ny PC birao, tokony haka ohatra avy amin'ny Microsoft izy ireo, ireo rindranasa ampiasako amin'ny findaiko, azoko ampiasaina amin'ny windows 8.1.
Julito-kun dia hoy izy:
»Raiso ny ohatr'i Microsoft»? Raha ny marina ny microsoft dia naka ny hevitra tao amin'ny Canonical, ny mahasamihafa azy dia ny microsoft dia manana fitaovana hanatanterahana izany ao anatin'ny 1 taona ary mila Canon na 3 na 4.
Fa eny, ny zavatra tadiavin'i Ubuntu amin'ny rafi-findainy dia ny fifandrindrana amin'ny birao, izay ho tonga miaraka amin'ny Unity 8, teorika ho an'ny 2016 ...
Mamaly an'i Julito-kun
Mozilla dia manao toy izany amin'ny Firefox OS sy ny tsenany feno fampiharana rindranasa mifanaraka amin'ny Firefox (efa nihatsara izy ireo tamin'ny hevitra Mozilla Prism).
josejacomeb dia hoy izy:
Raúl, raha ny amiko dia tsy hitovizany amin'ny Linux. Manana fizarana 1/2 ora marobe aho (ary ny mari-pana ambany) miaraka amin'ny Linux noho ny an'ny Windows 7, raha ny amiko dia apetako ireo mpamily maimaimpoana. Tadiavo ny lalana ho anao! Io ihany no làlana
Mamaly an'i josejacomeb
Miaraka amin'ity toro-lalana ity http://www.taringa.net/posts/linux/18073964/Optimizacion-de-energia-Dell-Inspirion-5521.html, Azoko maharitra maharitra 6 ora ny bateriko Dell amin'ny fananana tab 10 ao anaty firefoz sy fijerena horonantsary amin'ny youtube.
Manantena aho fa manampy anao izany,
Angamba zavatra iray tadiaviko betsaka momba an'i Ubuntu (Canonical na izany aza), dia ny famoahana ny kinova vaovao isaky ny 6 volana, toa ahy ny ezaka ataon'ny ekipa miasa tsy ilaina amin'ny fomba fijery rehetra. Angamba tokony hiala amin'ny LTS mankany LTS fotsiny ianao ary manome fanavaozana ny filaminana arak'izay tokony ho izy ary manampy fampiharana rehefa miseho ireo kinova "milamina" kokoa.
Ny olona tao amin'ny Canonical dia nahavita be tamin'ny fandrosoana sy ny fanatonana ny Linux hanakaiky kokoa ny olon-tsotra, satria isaky ny misy olona te-hiampita amin'io lafiny io dia avy amin'ny Ubuntu na derivatives no anaovany azy, be dia be ny forks amin'ity distro ity.
Izay no faniriako, angamba mahazo ahy aho, saingy ny "Distros in Trouble ™" dia saika misy olana be loatra matetika ary manjary manelingelina ilay mpampiasa tsy dia za-draharaha na vao manomboka.
Dingana iray lojika ho an'ny Canonical hifantoka amin'ny fizarana tena marin-toerana hanambatra ny orinasan'ny mpizara azy ireo, fa raha manao izany izy ireo dia mamela olona maro hiala. Noho izany, ny fijanonana avy any LTS mankany amin'ny LTS dia heveriko fa tsy safidy tsara raha tsy manao toa an'i Debian izy ireo.
Mpampiasa Linux somary vaovao aho, nanandrana distro vitsivitsy aho nefa naharesy lahatra ahy tamin'ny Ubuntu niaraka tamin'ny Unity sy ny rehetra. Nanomboka tamin'ny Linux aho tamin'ny Aogositra tamin'ny taon-dasa ary nandeha nizotra nankany amin'ny 14.04 LTS.
Ary eo no mandeha ny fanontaniako: tsy LTS ity kinova 15.04 vaovao ity? Fantatro fa ny LTS tsirairay dia tohana mandritra ny 5 taona, saingy fantatro fa ny 12.04 dia LTS ihany koa. Ka firy taona no nivoaka ity karazana kinova ity?
Huy, andrana Ubuntu toa an'i Debian, tsy hiala amin'izany mihitsy aho 😀 Fa amin'ny Xfce 😀
Sergo S, ao amin'ny pejy Ubuntu no misy ny fampahalalana rehetra. Ny LTS dia mivoaka isaky ny 2 taona ary, hatramin'ny 14.04, manana fanampiana 5 taona izy ireo. Ny LTS manaraka dia mivoaka amin'ny taona ho avy
Ireo kinova nivoaka teo anelanelan'ny LTS dia ireo "fitsapana", ka izay no tsy dia maharitra firy. Ny LTS no tena mendrika hankafizina (ireo fanontana ireo no tena niavian'i Debian, ary hatramin'ny fanavaozana voalohany dia manomboka manana fifanarahana bebe kokoa amin'ireo kinova farany an'ny Debian izy ireo).
Ny famoahana Rolling toy ny Arch na Antergos dia ny Distros amin'ny olana ™. Izany no antony handavako hampiasa azy ireo.
drilow dia hoy izy:
Efa nanandrana an'i Manjaro ve ianao? Rolling Release fa raha tsy misy "maimaika" dia maharitra herinandro vitsivitsy ny fanavaozana avy any Arch, izay amahana ny olana sy ny tsy fitoviana. Ny tombony rehetra amin'ny tontolo roa. (Azonao atao ny milaza fa tiako izany, marina? Satria efa nampiasaiko io dia tsy te hahalala na inona na inona momba an'i Ubuntu aho, ary tena mpankafy ny Unity aho)
Mamaly amin'ny drilow
pussycat dia hoy izy:
Miombon-kevitra tanteraka aminao aho, ny Canonical dia tsy tokony handany vola amin'ny kinova tsy LTS izay tsy misy mampiasa.
Mamaly an'i Kitten
XoceroX dia hoy izy:
Fa raha nanao izay nolazainao izy ireo, tsy ho lany andro ao amin'ny repos ve ilay rindrambaiko tsy "priorité"?
Ohatra, amin'izao fotoana izao ao amin'ny Ubuntu 14.10 dia nandeha nametraka ny lalao 0ad aho ary hitako fa miverina miverina 1 ilay izy. Raha 14.04 izy dia mety ho 2 na 3.
Ny marina dia ny rafitry ny isam-6 volana dia toa tsara amiko ho an'ireo olona mila bebe kokoa na maniry havaozina ary ny LTS ho an'ireo izay tsy te hihinana ny lohany ary mamela rafitra napetraka ary manadino ny ambiny (toy ny rehefa Napetrako tamin'ny raibeko, Linux mint 17 (LTS) ny Linux ary amin'ny 2019 dia mahita anao
Mamaly an'i XoceroX
Mihoatra ny fanitsiana sasany mankany amin'ny Unity izay tsy tiako, systemd sy ny kernel vaovao, andao lazaina fa tonga amin'ny famolavolana ny Debian izy ireo, tsy fantatro hoe firy ny fivoarana / fanatsarana nomen'ny Canonical ho fitoniana, sns. amin'ity kinova vaovao ity.
Na dia tsy LTS aza izany, ny marina dia mankaleo ireo famoahana Ubuntu farany farany, tsy hitako ny fandrosoana lehibe, rindrambaiko vaovao tany am-boalohany, raha fitoniana fa avy amin'ny sivana Debian dia toa tsy zavatra lehibe izany ...
Hanohy hampiasa ubuntu aho amin'ny lozisialy vao haingana sy ny fampiasana ppa, fa amin'ny maha distro referansa gnu / linux azy (tiako na tsia) dia mihemotra izy. Ary raha mahomby amin'ny finday avo lenta izy ireo, manantena aho fa tsy hajanona ny birao
Marina izany. Manahy mafy momba ny telefaona Ubuntu sy ny zavatra hafa izy ireo ary manadino ny fizarana birao. Efa nisy izany Canonical nameno Ubuntu tamin'ny fampiharana tsara (angamba ny azy ireo, angamba nihatsara avy amin'ny hafa), fa manohy mandray fampiharana avy amin'ny tetikasa hafa izy ireo ary tsy tena manova be. Vokatra? Fetsy mankaleo aorian'ny pitch mankaleo.
Na izany aza, raha te hampiasa Rindrambaiko nohavaozina + PPA ianao (amin'ity tranga ity AUR), manoro hevitra anao aho mba hanandrana Antergos 😉
Na chakra, crunchbang (raha toa ka tsipelina toy izany izy ireo). Raha mila "fientanam-po" kely kokoa ianao dia asaivo apetrak'izy ireo amin'ny LVM ny XD avy amin'ny fametrahana XD teo aloha
Dingana 4-5 farafahakeliny farafahakeliny, saingy mendrika ny manana Arch amin'ny LVM vaovao.
Mikasika ny Ivotoerana Rindrambaiko, indrisy fa tsy ho ao amin'i Debian Jessie izy io satria efa zatra antsika i Squeeze sy Wheezy (efa nifantoka tanteraka tamin'ny Ubuntu tamin'ny famoahana farany azy io). Tiako ho eo amin'i Debian Jessie ity singa ity, Fa inona no azo atao raha tsy manatsara ny singa tsara indrindra (Software Center, Unity) mankany Ubuntu i Debian na distros hafa ny Ubuntu mba hitovizany amin'ny GNOME, KDE ary ny interface birao hafa na dia tiako aza izany raha teo amin'i Debian Jessie ny ivon-rindrambaiko, ary efa hita eo amin'ny sisin'ny birao rehetra ireo rindranasa mifangaro.
Mariano Rajoy dia hoy izy:
ubuntu tsy mampiasa ny upstart hatreto? heveriko fa tsy init
Valiny tamin'i Mariano Rajoy
Raha ny marina dia efa nahare zavatra toy izao aho, saingy tamin'ny fanapahan-kevitr'i Debian dia nijanona tao amin'ny SysVInit izy ireo mandra-pahatongan'ny Debian hisoroka olana amin'ny ho avy, dia nanome ny fibaikoana ny SystemD. Raha tsiahivina dia nanomboka nijery an'i Upstart i Ubuntu raha vantany vao nijery ny SystemD i Debian.
JBono dia hoy izy:
Toa hitako fa mampiasa upstart, satria tamin'ny fotoana hafa dia nanao programa kely aho ary hitako fa tsy ny fizotran'ny 1 (init) no nandray ny fizotran'ny kamboty fa kosa ny ambony sy ny mijery kely manodidina izay nataon'i ubuntu tsy mampiasa init fa upstart izay toy ny kinova nohatsaraina.
Valiny amin'i JBono
George bool dia hoy izy:
Fampiasana betsaka ny teny toy ny zavatra, ny sasany ary ny ellipsis.
Toa tsy nahalala zavatra marobe azo antenaina avy amin'ny Ubuntu 15.04 ilay olona nanoratra ny lahatsoratra.
Mila manaisotra ny ratsy ianao amin'ny fomba an-tsoratra isan'andro. Tsy ny fitsikerana fotsiny no atao amin'ny fitsikerana fa mila mitsikera tsara koa ianao.
Valiny tamin'i George Bool
Derpie dia hoy izy:
Mihena ve ny fisehon'ny menio fisoratana anarana?
Valiny tamin'i Derpie
Heveriko fa tsy, araka ny sary farafaharatsiny. Toa amiko fa na iza na iza nanao ny lahatsoratra dia tsy nahita fa ao amin'ny Ubuntu dia efa misy menus ao amin'ny bara fiantsoana.
Nahazo nampiasa Ubuntu farafaharatsiny farafaharatsiny 2 na 3 aho noho ny olana momba ny mpamily sy ny foibe rindrambaiko. Rehefa nanao ny fitsangatsanganana tany amin'ny GnomeShell and Unity izy ireo dia aleoko kokoa noho ny nostalgia fotsiny i Gnome (nanomboka mandriva 2010 niaraka tamin'i Gnome aho) ary na dia tsy iray amin'ireo birao finday tsara indrindra aza izany dia tiako be izany.
Rehefa nilamina kely ny Ubuntu tamin'ny famoahana faharoa (na fanamboarana) ny Unity dia nanana olana be tamin'ny Compiz Fusion aho, tadidiko fa raha vao nametraka conky aho dia nanome hafatra tatitra momba ny bibikely tamiko, tamin'izay no nanao veloma an'i Ubuntu aho. .
Fintino ny tantara ...
1) Ny firaisankina dia nanome ahy olana isan-karazany.
2) Tamin'izany fotoana izany dia nitaraina momba an'i Fedora ny rehetra noho ny fahatongavany foana taty aoriana noho ny nomanina sy noho ny fahatanterahan'ny fampiharana azy, izay tao Ubuntu, na dia tsara kokoa aza, dia tsy antony naha-talanjona azy.
3) Avy am-baravarankely aho nanantena ny hampiasa zavatra TSY toa azy rehefa tonga tampoka ny doka tampoka.
4) Na dia tsy mitombina aza izany, dia halako volomparasy.
5) Tao amin'ny pc an'ny rahavaviko ny tompon'andraikitra fonosana dia nanana olana fa rehefa nanadihady nandritra ny roa andro aho dia tsy nahita vahaolana noho ny tsy fahampian'ny fotoana dia nanapa-kevitra ny hametraka indray aho. Ny namana maromaro izay nanakaiky ny lafiny maizina dia nanana olana mitovy amin'izany.
Misy maromaro hafa. Azoko atao ihany koa ny milaza fa ny voalaza rehetra etsy ambony dia fialan-tsiny fotsiny ary te hanandrana distro fotsiny aho mba hahafahako hianatra bebe kokoa momba ilay rafitra. Nahita an'i Arch aho.
Tsy ho famotsoran-keloka ve izany? sa voankazo fotsiny ireo tsaho ireo
Nanontany tena aho hoe ahoana ny fametrahana ny biraon'ny Open, satria mampiasa OpenLP aho ary toa mifanentana ihany izy ireo.
Inona no antenaina?… INONA NO HANTENA ?????
Hafahafa ny fanontaniana, hoy aho, avy amin'ny Ubuntu dia tsy afaka manantena ianao fa ny tsara indrindra !!!!
Rehefa dinihina tokoa, Ubuntu no hany distro misy ho avy ao amin'ny Linux, ny ambiny, raha tsy mifindra amin'ny rahona na fitaovana finday, dia azo lazaina fa avela.
Eo amin'ny birao etsy. Na dia tsy mila kaonty Ubuntu One aza ny marina, fa mety ho marina kosa ny fitaovana finday.
Ny distro tokana miaraka amin'ny hoavin'ny varotra tianao holazaina, fa noho izany dia mila miandry taona maro ianao.
Mamaly an'i teck
GNU / Linux dia vondrom-piarahamonina marobe. Debian miaraka amin'ireo maritrano marobe manohana azy sy ireo diso rehetra izay mitovy endrika amin'i Gentoo dia mbola manana hoavy lehibe, avy eo dia hisy ny olona izay "hanao" ireo distros ireo amin'ireo sehatra hafa manome ny fikitika azy ireo. Ny zava-misy manenjika mafy ny sehatra hafa i Ubuntu dia tsy midika hoe izy no voalohany na izy irery no nanao izany.
Manararaotra ny zava-misy fa efa nanokatra ity fanehoan-kevitra ity aho (sy ny hakamoana hanao hafa).
Ity mpankafy Ubuntu ity dia mampatsiahy ahy mpampiasa DW marobe, ireo izay efa nipetraka hatry ny ela, milamina izy ireo, mangatsiaka, manirery. Izy ireo dia mitazona ny halavirany amin'ireo hafa. Ireo mpampiasa vaovao, etsy ankilany, tsy afa-miala sasatra sy be herim-po ka manao zavatra izay hanenenany avy eo. Amin'izany dia tsy midika akory aho fa ny ubunter antonony dia tsy mahay mandanjalanja voajanahary, fa kosa miteny amin'ny avonavona be loatra amin'ny sainam-panahin'izy ireo, rehefa misy (mety hiteny aho) ireo zavatra izay mety ho tadiaviny bebe kokoa, milamina kokoa , nohavaozina bebe kokoa, tsara tarehy, be namana kokoa. Ary tsy mandeha amin'ny fomba fijery tokana izany, fa mety ho tsara kokoa amin'ny lafiny maro hafa. Amin'izao fotoana izao dia mitazona ny Arch aho ary hiverina bebe kokoa rehefa namaky antontan-taratasy bebe kokoa momba ny Gentoo.
Vince dia hoy izy:
Tsy azoko hoe nahoana no tofoka ao Ubuntu, koa maninona no manoratra momba izany?
Ampiasaina inona izany isika?
Ny lahatsoratra nosoratana tamina tsy firaikana tahaka izany dia tsy taratry ny tsy fahampian'ny matihanina sy ny tsy fanajana ireo mpamaky. Andao! Tsy te hiafara amin'ny fialana amin'ity bilaogy ity aho.
Valiny tamin'i Vince
Tsy namaky an'izany aho. Raha ny marina, ny fanovana natao tamin'ity kinova ity dia mifandraika ampy mba hisarihana ny sain'ny mpampiasa GNU / Linux (indrindra ireo izay nanantena foana ny hampiasa an'i Ubuntu ho "fialofana farany" hiadiana amin'ny SystemD).
Mikasika ny fisehon'ny menio namboarina tamin'ny bara lohateny, dia toa hevitra tsara amiko izany.
Amin'izao fotoana izao, hamporisihina hampiasa ny kinova Ubuntu 14.04 aho (manana ny ampy amin'ny famelana ny systemd amin'i Debian Jessie aho).
Andraso tsara ary ampidino ny Debian 8 rehefa mivoaka afaka andro vitsivitsy.
Mieritreritra aho fa mbola lavitra ny làlana tokony horaisina momba ireo fampidirana vaovao ireo (systemD, sns), tsy maintsy miandry isika hahitantsika ny fahombiazan'ny fampiharana izany.
Iray amin'ireo nanomboka tamin'ny Ubuntu aho ary vetivety dia nilaozany ho an'ny distro hafa. Newbie aho ary ny olako amin'ny 14.04 dia ny tsy fahafahako mamorona fidirana amin'ny birao.
Izaho manokana dia niandry ny firosoan'ny systemd amin'ny ubuntu sy debian ho an'ny homolojika ny tetika sy ny fampianarana ao amin'ireo distro rehetra, misy bilaogy bebe kokoa hanampiana ireo mpampiasa azy, ary koa ny wiki dia tsy maintsy havaozina. Miaraka amin'ity fanavaozana ity dia misy ihany koa ny serivisy vaovao toa an'i (ohatra) ny suite bluez 5. Tena tokony hankalazaina tokoa.
Valio amin'i DESE
igacio salgueiro dia hoy izy:
Taorian'ny famakafakana ny Ubuntu 15.04 sy ny kinova 14.04 amin'ny solosaina iray ihany dia misy fiovana miavaka amin'ny resaka fanjifana loharanon-karena, Ubuntu 15 tsy dia mahay miteny noho ny 14, angamba resaka mpamily sary, na resaka inona no mavesatra ao amin'ny Ubuntu 15 ampidino. Ampiasao ny kinova 32-bit amin'ny tranga roa ...
Mamaly an'i igacio salgueiro
Martin Elias Lopez R dia hoy izy:
Iza no miara-miasa amiko !! Miaraka amin'ny Q Applications dia homonyms amin'ny Windows miaraka amin'ny Ubuntu izy ireo !!
Valiny tamin'i Martin Elias Lopez R
**** ity dia nahatonga ny PC-ko tsy nahomby tamin'ny feo. Tsy maintsy nofafako ny kapila manontolo tamin'ny Ubuntu 12.04.
Ralehilahy, inona no mampientanentana an'ity zavatra LTS ity. Nivoatra ho ubuntu 14.10 aho ary lany ny fanohanan'ny fanavaozana. Manontany ahy izy hanavao ny 15.10 ary toa hanome fanampiana mandritra ny 9 volana. Manana fifandraisana Internet tsy dia haingana aho ary izao aorian'ny 9 volana dia tsy maintsy manavao indray aho. Aleo aho mieritreritra ny fampidinana ny 14.04.2 LTS! na tsara kokoa, mifamadiha amin'ny fizarana GNU / Linux hafa!